बहुविध परीक्षण परीक्षण कक्षाको शिक्षिका द्वारा प्रयोग गरिएको सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकारको एक हो। तिनीहरू शिक्षकहरू निर्माण र स्कोरको लागि सजिलो छन्। धेरै छनौट परीक्षाहरू मास्टर गर्दै सामग्रीको मास्टर र एक भाग कुशल परीक्षा लिइरहेका छन्। निम्न बहुविध परीक्षण परीक्षण रणनीतिहरूले छात्रहरूलाई एकछिन छनौट मूल्याङ्कनमा आफ्नो स्कोर सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ। यी रणनीतिहरू विद्यार्थीको जवाफ सही हुने संभावना बढाउन डिजाइन गरिएको छ।
यसलाई बहुविध छनौट परीक्षामा यी प्रत्येक रणनीतिहरू प्रयोग गर्ने आदत बनाउनु तपाईंलाई एक राम्रो परीक्षण टेकर बनाउनेछ।
जवाफ हेर्न अघि कम्तिमा दुई पटक प्रश्न पढ्नुहोस्। त्यसपछि जवाफ विकल्पहरू कम्तिमा दुई चोटि पढ्नुहोस्। अन्तमा, यो प्रश्न फेरि एक पटक पढ्नुहोस्।
सधै सम्भव प्रतिक्रियाहरू पेपरको टुक्रा वा तपाईंको हातको साथ जब तपाईं स्टेम वा प्रश्नको शरीर पढ्नुहुन्छ। त्यसपछि, सम्भावित उत्तरहरू हेर्न अघि आफ्नो टाउकोमा जवाफ दिनुहोस्, यस तरिकाले टेस्टमा दिएको छनौटले तपाईंलाई फेंक गर्दैन वा तपाईंलाई चाल गर्दैन।
जवाफहरू हटाउनुहोस् तपाईलाई थाहा छ सही छैन। प्रत्येक जवाफ तपाईं समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ बढ्दो प्रश्नको आफ्नो बाधाहरू बढ्छ।
बिस्तारै गर्नुस्! तपाईंको उत्तर चयन गर्नु अघि सबै छनौट पढ्नुहोस्। मान्नु नसक्ने पहिलो जवाफ सही छ। सबै अन्य विकल्पहरू पढ्न समाप्त हुनुहोस्, किनभने पहिलो फिट हुन सक्दछ, एक पछिल्लो राम्रो, अझ सही जवाफ हुन सक्छ।
यदि कुनै अनुमानित दण्ड छैन भने, सधैं एक शिक्षित अनुमान लगाउनुहोस् र जवाफ चयन गर्नुहोस्। जवाफ खाली नछोड्नुहोस्।
तपाईंको जवाफ परिवर्तन गर्न नदिनुहोस्; सामान्यतया तपाईंको पहिलो छनौट सही छ जब तपाईं प्रश्नलाई नरोक्नु हुन्छ।
"माथिको सबै" र "उपरोक्त" मध्ये कुनै पनि छनौटमा, यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ भने एक बयान सही छ भने "माथिको कुनै पनि" वा एक बयान मध्ये कुनै पनि गलत छनौट छैन "माथिको सबै "।
"उपरोक्त सबैको" छनौटको साथ एक प्रश्नमा, यदि तपाईंले कम्तीमा दुई सही बयानहरू देख्नुहुन्छ, त्यसपछि "माथिको सबै" सही जवाफ विकल्प हुनेछ।
टोन फर्किन सक्छ। एक सकारात्मक जवाफ विकल्प नकारात्मक उत्तर छनौटमा अधिक सम्भव हुन सम्भव छ।
Wordiness एक राम्रो सूचक हो। सामान्यतया, सही जवाफ अधिक जानकारीको साथ छनौट हो।
यदि सबै असफल भएमा, प्रतिक्रिया (बी) वा (सी) चयन गर्नुहोस्। धेरै प्रशिक्षकहरूले अवचेतन रूपमा महसुस गर्छन् भने सही जवाफ "लुकेको" राम्रो छ भने यो विचलित हुन्छन्। प्रतिक्रिया (ए) सामान्यतया कम्तिमा सही एउटा सम्भव छ।
लाइनहरूमा रहनुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले उपयुक्त बुलबुलहरूसँग सावधानीपूर्वक भरिएको छ A #2PENCIL सँग । निश्चित हुनुहोस् कि कुनै पनि स्ट्रीट अंकहरू छैनन्।
जवाफ दिनको लागी तपाईंको काम जाँच गर्न समय लिनुहोस्। समयबद्ध परीक्षणमा, तपाइँका उत्तर छनौटहरू धेरै सकेसम्म जित्नको लागि दोस्रो सेकेन्ड प्रयोग गर्नुहोस्। अज्ञात परीक्षणमा, धेरै चोटि सबै चीजहरू जाँच गर्नुहोस्।
यो Funky बनाउनुहोस्!
राम्रो LSAT स्कोर के हो?
प्रिमियम स्टेज मेकअप विक्रेताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु
बास्केटबलको ईमानदारी क्लज
शाप र कर्सन: के अभिशाप भनेको हो?
निरपेक्ष र सापेक्ष त्रुटि गणना
Ptolemies को शासक - अलेक्जेंडर देखि क्लियोपेट्रा सम्म प्राचीन मिस्र
2010 हैती भूकम्प पछि विज्ञान
परिवर्तनको बारेमा प्रसिद्ध उद्धरण
कसरी 360 पछाडि पछाडि यो
नि: शुल्क स्टेंसिल संग्रह: कुत्ता स्टेन्सिल
सामग्री विज्ञान मेला परियोजनाहरू
बाइबिल तथ्यहरू: नम्बरहरू द्वारा
अल्फाटिक हाइड्रोकार्बन परिभाषा
सामान्यतया दुरुपयोग शब्दहरू: कसले र कसलाई
गुगल समाचार अभिलेखका लागि खोज सुझावहरू
रक साइकल रेखाचित्र
उत्तरी डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी प्रवेश
कसरी टेबल साल्ट वा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बढाउनुहोस्
4 Svingslana Khorkina को बारे मा जान्न को लागि चीजें
रग्बी, भाग V को लागि फिट बनाउने
गोरान्बोरो (यूएनसीजी) मा उत्तरी क्यारोलिना विश्वविद्यालय प्रवेश
व्याकरण र उपयोगबीचको भिन्नता के हो?
स्वीडेन को भूगोल